हामीले भरतपुरको मात्र मतपत्र च्यात्तिएको हो ओलीले तीन करोड जनताको मत च्यातेका छन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै दिएका अभिब्यक्तिलाई लिएर भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले कडा प्रतिकृया दिएकी छन् । उनले आफ्नो परिवार प्रति ओलीले पटकपटक व्यक्तिगत प्र’हा’र गरी राजनैतिक हिं’सा गरेको आरोप लगाएकी छिन् । बिहीबार प्रेस
संगठन नेपालको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना छोरी–ज्वाइँका लागि मात्रै काम गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको सो अभिब्यक्ति प्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन् । आफ्ना
चाहानाहरु सबै त्यागेर जनताको हितमा लडेको भन्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थमा कहिल्यै लागिएन, सेवामा समर्पित हुनु कमजोरी हो ? नकी अरुको जस्तो बाले राजनीति गर्ने र छोराछोरीले फाइदा लिएर लु’ट्’नु पर्ने हो ?’ उनले बरु प्रधानमन्त्रीले आफ्ना गुटका आसेपासेहरुलाई भन्दा अरुका
लागि केही नगरेको आरोप लगाएकी छन् । ‘तपाईंले जन्माएका छोराछोरी छैनन् भन्दैमा फेरि तपाईंले के आफ्नो गुट आसेपासे र साइबर सेनामा भर्ति भएकालाई भन्दा बढ्ता कसलाई के गर्नु भएको छ ? अति भो महाराज,’ उनले लेखेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई मतपत्र च्यातेर जिताएको भन्दै
दिएको अभिब्यक्ति पनि रोष ब्यक्त गरेकी छन् । २९ वटा वडामध्ये एउटा वडामा मात्रै त्यस्तो घटना घटेको त्यो दुर्घटनाले आफूलाई दुखित बनाएको भन्दै उनले आफूले २९ वटै वडाका जनताको अभिमतले जितेको बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ३ करोड जनताको मत च्यातेर संविधान भन्दा आफू
माथि ठानेको आरोप समेत उनले लगाएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘आफू ३ करोड नेपाली जनताको मत च्यातचुत गर्ने र तानाशाही शासक बन्दै संबिधान कानुनभन्दा माथि ठान्ने यो के हो ?’ लिपिलेख टाईम्स बाट